China Umenzi wobuchwephesha kubungakanani obahlukeneyo beCeramic Flat Burrs abavelisi kunye nabathengisi | Nciphisa
Umenzi wobuchwephesha kubungakanani obahlukeneyo beCeramic Flat Burrs
I grinder ye burr lelona candelo libalulekileyo lokusila. I-grinder ezahlukileyo zokuhambisa ziya kusasaza ngokuthe ngqo ubukhulu bekhofi. Iindidi zegrey grinder ezikhoyo kuyo yonke indawo zahlulwe zangumlinganiso we-burr, i-burr ethe tyaba kunye ne-ghost yamazinyo.
Iflethi: Iqukethe i-burr ezimbini, enye i-burr ihlala imile, kwaye enye inoxanduva lokujikeleza nokusila. Isila iimbotyi zekofu ibe ngamagrafu ngokusika, ke ukumila kwayo ikakhulu kukwimo yeeflakes. Isakhiwo kukuba i-burrs ephezulu nephantsi ibekwe ngokudibeneyo, kwaye iimbotyi zekofu zityhalelwa ngaphakathi ukuze zigutywe ngamandla ajikelezayo ezantsi. Ke ngoko, ubunzima beembotyi zekofu ezingentla ziya kuchaphazela ukufana kweembotyi zekofu kwi-burrs. Ngenxa yefuthe leembotyi zekofu, umlinganiso wepowder ecolekileyo uyonyuswa. Nangona kunjalo, i-burr ethe tyaba ikwimo ye-sheet kwaye indawo yodonga lweseli inkulu, ke ngoko uxinzelelo lwekofu kunye nokukhupha kunokunyuswa ngexesha elifutshane. Ukunyuka kwamaxabiso kunye nevumba ngexesha elifutshane. Ngenxa yesayizi encinci yeeflakes, kunzima ukukhupha ixesha elide ukucutha amanzi amaninzi ukuvelisa ukuthanda izinto ezahlukeneyo kunye ne-astringent. Ukulungele ukugaya kwe-Italiya kunye nokugaya ngesandla.
I-burr ethe tyaba yahlulwe yangamacandelo amabini: i-ceramic kunye ne-stainless steel. I-ceramic burr flat inezibonelelo zokuqina okuphezulu, ixabiso eliphantsi, akukho livumba likhethekileyo, kunye nokuhlamba amanzi.
Inkampani yethu igxile ekuveliseni i-ceramic burrs iminyaka engama-20, sinamava atyebileyo kuyilo lwesakhiwo semveliso, uyilo lweprofayili yamazinyo kunye nokusebenza ngokutyibilika, ezi zinto zezona zinto ziphambili ezichaphazela ukusebenza kokugaya umgubo kunye nokucoceka kunye nokufana komgubo .
Egqithileyo Isicoci seKofi esineSimbi engenasiphelo
Okulandelayo: Elungiselelweyo Stainless Glass Bottle neTyiwa Pepper izihlukuhli
ICeramic Grinder Grr